आराम ठाउँहरू सिर्जना गर्न भुइँ कुशन प्रयोग गर्नुहोस् | बेजिया
आराम ठाउँहरू सिर्जना गर्न भुइँ कुशन प्रयोग गर्नुहोस्
मारिया vazquez | | फर्नीचर
को भुइँ तकियाहरू तिनीहरूले पाउफ भन्दा ठूलो आराम प्रदान गर्दछ र यी हुनाले तपाईं तिनीहरूलाई जहाँ चाहानुहुन्छ सार्न सक्नुहुन्छ। Bezzia मा हामी विश्वास गर्छौं कि तिनीहरू सधैं घर भित्र र बाहिर दुवै आराम ठाउँहरू सिर्जना गर्न सही विकल्प हुन्। र मलाई लाग्छ कि जब तपाइँ हामीले लेख चित्रण गर्न छनौट गरेका छविहरू देख्नुहुन्छ, तपाइँ पनि यो विश्वस्त हुनुहुनेछ।
अधिक र अधिक फर्महरूले यी कुशन वा सोफाहरूमा दांव लगाइरहेका छन् - तपाईंले तिनीहरूलाई दुवै तरिकामा बप्तिस्मा पाउनुहुनेछ- जुन स्वतन्त्र रूपमा र सेटहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यो बहुमत हो तिनीहरूसँग एक मोड्युलर डिजाइन छ। यदि तपाइँ आरामको लागि डिजाइन गरिएको ठाउँमा अनौपचारिक, ताजा र बोहेमियन हावा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, नोट लिनुहोस्!
1 मोड्युलर फ्लोर कुशन
3 टेरेस वा बगैचा
मोड्युलर फ्लोर कुशन
मोड्युलर फर्निचर सबै क्रोध हो, त्यसैले त्यहाँ अपवादको रूपमा मोड्युलर सोफा वा भुइँ कुशनको बारेमा सोच्ने कुनै कारण छैन। सबै मोड्युलर फर्निचरहरू जस्तै, तिनीहरूले तिनीहरूमा शर्त लगाउने निर्णय गर्नेहरूलाई प्रदान गर्छन्, ठूलो लचिलोपन।
दायाँ तल्ला तकियाहरू द्वारा निर्मित
मोड्युलर फ्लोर कुशनले तपाईंलाई आफ्नै संरचना सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ ठाउँ र आवश्यकता अनुसार अनुकूलित हरेक क्षणमा। र तिनीहरूका लागि चीजहरू सजिलो बनाउन कसलाई मन पर्दैन? तिनीहरू माथिल्लो र जमिनमा आराम नगर्ने हुनाले, तिनीहरू सबैका लागि समान रूपमा सहज छैनन्, तर तिनीहरू जवान र अनौपचारिक वातावरणमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन्।
यी अधिकांश कुसन वा सोफामा ए स्टाइरोफोम बल फिलिंग आवश्यक मोटाईको साथ ताकि तपाईं बस्दा तपाईं जमिनबाट अलग रहनुहुनेछ। र धेरैले ब्याकरेस्ट समावेश गर्दछ, केहि चीज जसले निस्सन्देह, तिनीहरूलाई थप सहज बनाउँछ। रङहरूको लागि, तपाईंले तिनीहरूलाई विस्तृत दायरामा फेला पार्नुहुनेछ किनकि तपाईंसँग जाँच गर्न समय हुनेछ।
भुइँ कुशनहरू मुख्यतया भित्री ठाउँहरू प्रस्तुत गर्नका लागि बनाइएका टुक्राहरू हुन्। अधिकांश छन् कपासबाट बनेको, जसले तिनीहरूलाई रमाइलो स्पर्श दिन्छ र सास फेर्ने क्षमताको ग्यारेन्टी दिन्छ, यदि तपाइँ तिनीहरूमा बसेर वा सुतेर लामो समय बिताउने योजना बनाउनुहुन्छ भने, यो धेरै महत्त्वपूर्ण विशेषता हो।
तिनीहरूसँग रेट्रो टच छ र एकै समयमा एक विदेशी बिन्दु, तिनीहरूको रंगमा निर्भर गर्दछ, कुनै पनि भित्री ठाउँमा ताजगी ल्याउन सक्षम। तिनीहरू पनि एक अद्वितीय छनोट हुन्, त्यसैले तिनीहरू बेवास्ता गर्दैनन्। हामी विश्वास गर्छौं कि तिनीहरू साना बच्चाहरूको लागि खेल कोठाहरू सजाउने उत्कृष्ट प्रस्ताव हुन् वा पारिवारिक ठाउँ, फुर्सद को लागी समर्पित।
स्क्लम फ्लोर तकियाहरू
सामान्य कुरा यी भुइँ कुशनहरू पर्खाल विरुद्ध र एक छेउमा राख्नु हो राम्रो फ्लफी गलीचा। यसमा तपाईंले किताबहरू र/वा मैनबत्तीहरू, साथै अन्य कुसन र कम्बलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसले ठाउँको न्यानोपनमा योगदान गर्दछ। थप रूपमा, बिरुवाहरू र बिरुवा फाइबर सामानहरू यी ठाउँहरूमा पूर्ण रूपमा फिट हुनेछन्।
टेरेस वा बगैचा
तपाईं यी भुइँ कुशनहरू बाहिरी ठाउँहरू सजाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म तिनीहरू तत्वहरूमा पर्दा छैनन्, उदाहरणका लागि पोर्चहरू र कभर टेरेसहरूमा। यद्यपि आदर्श पलिएस्टर कपडाहरूमा यी ठाउँहरूको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको टुक्राहरूमा शर्त लगाउनु हो। बाहिरको लागि विशेष उपचार, पानी प्रतिरोधक।
तिनीहरूसँग विशेष उपचार छ भन्ने तथ्यको मतलब यो होइन कि तिनीहरू धेरै आर्द्र ठाउँहरूका लागि उपयुक्त छन् वा वर्षाको लागि धेरै खुला छन्। उत्तरमा, उदाहरणका लागि, यो आवश्यक हुनेछ तिनीहरूलाई पतनमा उठाउनुहोस् र गर्मी पनि यदि हामी तिनीहरूलाई लामो समयको लागि राम्रो परिस्थितिमा आनन्द लिन चाहन्छौं। एक ठूलो तर किनभने तिनीहरू हल्का र ढुवानी गर्न सजिलो भए तापनि, सत्य यो हो कि तिनीहरूले ठाउँ लिन्छन्।
Bezzia मा हामी यी भुइँ कुशनहरू मन पराउँछौं आराम ठाउँहरू सिर्जना गर्न जहाँ बसेर पढ्न वा घर भित्र चलचित्र हेर्नको लागि, तर टेरेसमा सूर्यास्तको आनन्द लिन पनि, होइन? उनीहरुले पनि सक्छन् धेरै मानिसहरू समायोजन किनकि तिनीहरू ठूला छन्, त्यसैले तिनीहरू पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्नका लागि उपयुक्त छन्। तपाईं एक यहाँ र अर्को त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई बैठक कोठामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ जब राम्रो संख्यामा मानिसहरू बस्न आवश्यक हुन्छ र सबैजना सोफामा फिट हुन सक्दैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » आराम ठाउँहरू सिर्जना गर्न भुइँ कुशन प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँ आफ्नो पार्टनरलाई माया गर्नुहुन्न भने कसरी व्यवहार गर्ने
वसन्तलाई स्वागत गर्न सेतो प्यान्ट लगाएको पोशाक